Lumlux Anewe paKIFE
ne admin pane 19-06-14
Lumlux irikuenda ku21 Kunming International Flower Expo yeChina (KIFE) kubva munaChikunguru 12 kusvika 14. KIFE yakavambwa muna 1995. Mushure memakore anopfuura makumi maviri ezviitiko kuunganidzwa uye kunaya kwemvura, rave chiitiko chepamusoro-soro chekutengesa chinotungamira kusimudzira. yeindasitiri yemaruva muAsia ....
Lumlux "Kumhara" kuGreenTech
ne admin pane 19-06-11
GreenTech ndiyo nzvimbo yemusangano wepasirese wevashandi vese vanobatanidzwa muhunyanzvi hwekurima miti muRAI Amsterdam. GreenTech inotarisa pamatanho ekutanga eiyo horticulture cheni uye nyaya dzekugadzira dzinoenderana nevarimi. GreenTech ichaitwa kubva 11-13 Chikumi 2019 muRAI Amsterdam Iine rapi ...
Zhengzhou International Horticultural Expo 2018, tiri kuuya!
ne admin pane 18-10-28
China Zhengzhou International Horticultural Exhibition yakaitwa nhasi kuZhongyuan International Expo Center muZhengzhou, Dunhu reHenan. Dingindira reratidziro iyi ndere "Innovation yekuvandudza Maindasitiri, Brand Kukanda Ramangwana", ine chinangwa chekusimudzira tekinoroji kusimudzira uye kutsividza chigadzirwa mu th ...
Lumlux Corp. yakapinda mu2018 Autumn Hong Kong International Lighting Fair
Lumlux Corp. yakapinda mu2018 Autumn Hong Kong International Lighting Fair kubva Gumiguru 27th kusvika 30th kuHong Kong International Convention uye Exhibition Center. Vanopfuura zviuru gumi + varatidziri vakapinda mudariro panguva ino. Lumlux ndeimwe yemakambani mashoma anotakura kukura kwechiedza fixtur ...
Rwendo rutsva nerutsva tekinoroji nyowani, Lumlux yakakumirira ku2018 International Lighting Exhibition
ne admin pane 18-09-12
Chikumi 9-12, 2018 China Kunze uye Kunze Kunze Kwekunze Guangzhou International Lighting Exhibition (Guangya Exhibition) Suzhou Lumlux ichakuratidza 6 makuru ekushandisa zviitiko neicho chaicho-chenyika simulation tekinoroji Rwendo kuenda kune repamusoro indasitiri mutambo! Lumlux Booth Nha .: D18, B ...
Kubudirira kubata kwe2018 Plant Factory Innovation Technology Shanduko Musangano
ne admin pane 18-08-24
Musi waAugust 24, 2018, inotsigirwa neNational Smart Plant Factory Innovation Alliance, yakarongedzwa neAgriculture Lighting Network, 2018 Plant Factory Innovation Technology Exchange Musangano • Suzhou Station (Nha. 4) yakaitirwa kubazi reSuzhou UL Meihua Certification Co ., Ltd., muSuz ...
Lumlux muna 2018 China Yepasi Pose Dhivha Fekitori uye Yekurima Mwenje Expo
ne admin pane 18-08-13
Suzhou Lumlux Corp yakabatana mu2018 China International Plant Fekitori uye Yekurima Mwenje Expo kuShanghai International Sourcing Exhibition Center muna Nyamavhuvhu 13, 2018. Yakarongedzwa neInstitute of Environment uye Sustainable Development yeChinese Academy yeAgriculture Sayenzi, izvi ...
Suzhou Lumlux | 2018 Guangzhou International Lighting Exhibition yakasvika kumagumo anobudirira!
ne admin pane 18-06-12
Mazuva mana 2018 Guangzhou International Lighting Exhibition yakapera musi wa12 Chikumi pakati pekupisa kwemazuva echirimo muGuangzhou City. Kunyangwe pakapisa mamiriro ekunze mushure medutu, zvakange zvichiri zvakaoma kuramba kushingairira kwevanhu pakuratidzira, Lumlux's Booth yakazadzwa nevisi ...
Chivabvu 2018 US LIGHTFAIR International
ne admin pane 18-05-08
Nezve Fair LIGHTFAIR International, yakatsigirwa neNorth American Lighting Engineering Association uye neInternational Lighting Design Association, parizvino ndiyo yekuratidzira kukuru kwemwenje nevateereri vakanyanya uye simba repasirese muUnited States. Munguva ye exhi ...
Yakazara Spectrum Yakatungamirwa Mwenje, Round Yakatungamirwa Kura Mwenje, Yakachena Kura Chiedza, Akatungamira Led Light Fixtures,